Kazakhstan waxay jareysaa duulimaadyada UAE, Jarmalka, Ukraine, iyo Belarus
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Kazakhstan waxay jareysaa duulimaadyada UAE, Jarmalka, Ukraine, iyo Belarus
Airlines • Airport • Aviation • Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Kazakhstan • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Ukraine War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Sarkaalka Sare ee Nadaafadda Kazakhstan ayaa ku dhawaaqay in waddanku qorsheynayo inuu yareeyo adeegga hawada ee ay la leeyihiin Imaaraadka, Jarmalka, Ukraine, iyo Belarus.
Intii lagu guda jiray wada-hadalka saxaafadda ee internetka, sarkaalka ayaa shaaca ka qaaday in xayiraadaha ay dhaqan geli doonaan mustaqbalka dhow iyo in ay ku qasbeen sii xumeynta. Covid-19 xaalada wadamadaas. Tallaabada, sida uu sheegay, ayaa sidoo kale gacan ka geysan doonta xakameynta tirada kiisaska la soo dhoofiyo.
Madaxa Nadaafadda ayaa intaas ku daray in Kazakhstan ay xaddidi doonto oo keliya duulimaadyada ka baxa Imaaraatka.
Mar sii horeysay, Wasiirka Caafimaadka Kazakhstan ayaa shaaca ka qaaday in dalkaasi uu qorsheynayo yareynta tirada duulimaadka ee la aadaya Turkiga.
WTTC: Waaxda Socdaalka & Dalxiiska ee Faransiiska ayaa qarka u saaran inay...